TOBAN Baxaya Iyo LIX Imanaya: Burburkii Everton U Geysatay Oo Waji Cusub U Yeelaya Qorshaha Suuqa Ee Man United Iyo Xiddigaha Baxaya Oo Mid Ka Mid Ah Farriin Macasalaamayn Ah Soo Diray – Latest Sports News
TOBAN Baxaya Iyo LIX Imanaya: Burburkii Everton U Geysatay Oo Waji Cusub U Yeelaya Qorshaha Suuqa Ee Man United Iyo Xiddigaha Baxaya Oo Mid Ka Mid Ah Farriin Macasalaamayn Ah Soo Diray
Maamulka Manchester United ayaa ugu dambayn xaqiiqsaday inay u baahan yihiin go’aamo culus iyo qorsheyaal si taxadar leh loo dajiyey in lagu waajaho dibu-dhiska kooxda, kaddiib markii ay guul-darrooyin xidhiidh ah soo food-saareen, sidoo kalena ay Everton dhabarka kaga jabisay gudaha garoonka Goodison Park.
Toddoba guul-darro oo sagaal ciyaarood gudahood diiwaanka u galay Manchester United, waxa iska cad inay u baahan tahay isbeddel ka bilaabma xididdada oo ugu dambayn gaadha muruqyada, taas oo ah in salka hoose laga soo bilaabo dhismaha naadiga si ay sannadaha soo socda ugu loollami karaan kaalmaha sare iyo inay horyaalkaba qaadi karaan.
Markii ay Manchester United magacowday Solskjaer waxay kusoo laabatay jidka guusha oo kaalmaha sare ayay kusoo laabatay, laakiin mar kaliya ayay timid xaqiiqada ah in Jose Mourinho aanu lahayn eedda hoos u dhaca kooxda, laakiin hadda waxa go’aamo adag qaadanaya maamulka sare oo la sheegay inay toban ciyaartoy ka dirayaan naadiga, lix kalena soo iibsanayaan suuqa xagaaga ee foodda inagu soo haya.
Mid ka mid ah ciyaaryahannada la warinayo inay iska baxayaan oo ah Kabtanka rasmiga ah ee naadiga, Antonio Valencia ayaa farriin uu bartiisa bulshada ku baahiyey waxa uu ku macasalaameeyey kooxdiisa, taageereyaasha iyo maamulkaba, taas oo inkasta oo aanu si caddaan ah ugu bayaaminin bixitaankiisa, haddana turjumaadda guud noqotay inay shandaddiisu u xidh-xidhan tahay oo uu sugayo illaa badhtamaha bisha May.
Ciyaaryahannada lixda ah ee la hadal hayo inay imanayaan Manchester United, waxa kaga bixi doonta lacag badan, laakiin xoogaa kab ah waxay ka helayaan tobanka ay dibedda dhigayaan oo badankoodu si xor ah u bixi doona.
Kubbad-burburiyaha reer Serbia ee Nemanja Matic oo dusha iska saaray eedda guul-darradii Everton ee 4-0 ahayd, ayaa kusoo baxay liiska warbaahinta Ingiriisku ay sheegtay in magacyadooda laga tirtiri doono diiwaanka xiddigaha rasmiga ah ee Man United.
Ninka mushaharka ugu badan ka qaata kooxda ee Alexis Sanchez ayaa sidoo kale ka mid ah laacibiinta laga dirayo Old Trafford, waxaana wehelin doona Ander Herrera oo wararku sheegayaan inuu heshiis saddex sannadood ah la gaadhay PSG oo mushahar badanna u ballan-qaadday.
Xiddiga kale ee reer Spain ee Juan Mata ayaan sii fadhiyi doonin kaydka Manchester United, waxaanu qaadan doonaa shandaddiisa marka uu suuqu furmo, waxaana suurtogal ah inuu dib ugu laabto waddankiisa oo uu ku biiro mid ka mid ah kooxaha La Liga ka ciyaara.
Liiskan waxa kale oo kusoo baxay goolhaye David de Gea oo ganafka ku dhuftay inuu heshiis cusub u saxeexo kooxdiisa, iyadoo hal xili ciyaareed uu ka dhiman yahay qandaraaskiisa, sababtaas darteed, mar haddii aanay kooxdu diyaar u ahayn inay kordhiso mushaharkiisa uu hadda ka qaato ee toddobaadkii ah 200,000 Gini, waxay door-bidayaan maamulku inay iibiyaan si aanu uga tegin isagoo xor ah dhamaadka xili ciyaareedka dambe.
Liiska ciyaaryahannada ka baxaya Manchester United:
Ciyaaryahannada imanaya Old Trafford
Sida warbaahintu tabisay, Manchester United waxa iman doona lix ciyaartoy oo u badan da’yar marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga, waxaase ku jiri doona Gareth Bale oo Real Madrid ay go’aan ka gaadhay mustaqbalkiisa, isla markaana ay iibinayso, haddii ay koox ka iibsata weydana amaah ku bixinaysa.
Da’yarka kooxda Borussia Dortmund ee Sancho ayaa ka mid ah xiddigaha United doonayso inay ku hawlgasho xili ciyaareedka dambe, laakiin waxa binada hoose ahaan doona goolhayaha Atletico Madrid ee Jan Oblak oo warbaahinta Spain xustay inuu isku diyaarinayo safka uu ku tegayo Ingiriiska.
Difaaca kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly ayay mar kale isku dayi doontaa Manchester United sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd.
Liiska xiddigaha imanaya: